China Cultural Stone-VNS-1308DCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ လန်ဆန်
ပစ္စည်းအမည်: အနက်ရောင် Quartz နံရံကပ်အဝတ် Thin Panels များ
အရွယ်အစား:100X360MM / 100X350MM / 100X400MM
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း: T / T သို့မဟုတ် L / C
၁။ အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးစျေးပေါနိုင်သည်။ ဤတောက်ပသောအနက်ရောင်အရောင်သည်ယဉ်ကျေးမှုကျောက်တုံးနှင့်အခြားအရောင်များနှင့်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏ထူးခြားသောသဘာဝကျောက်တုံးဖြင့်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။
2. အလေးချိန်သည်အခြားထုတ်ကုန်များထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသယ်ဆောင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
3. ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဓာတ်ပုံများ၊ ပုံဆွဲခြင်းများအားဖြင့်ဒီဇိုင်းများကိုပေးသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားထုတ်ကုန်များနှင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
၄။ ၎င်း၏ထူးခြားသောမျက်နှာပြင်သည်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများ - ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်ဒီဇိုင်းများသည်မတူကွဲပြားသောပုံစံများသို့ ဦး တည်ခြင်းမရှိပါ။ တကယ်တော့ဒါကလူတွေဟာမတူကွဲပြားတဲ့ခံစားချက်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးတာကြောင့် slate briks အလှတရားကိုသာတိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုအိမ်ရာနှင့်အပြင်ပိုင်းအလှဆင်ခြင်းအတွက်သီးသန့်အိမ်ရာနှင့်စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြီးမားသောစတုရန်း၊ လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရှုခင်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သဘာဝသို့ပြန်လာ၏ခံစားချက်ကိုဖော်ပြ
ဂ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်သောအဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ QC သည်ကုန်ကြမ်းမှအပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များအထိတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။
ဂ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ ADEO, KINGFISHER, RONA, OBI နှင့် HOMEDEPOT တို့အားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ရှေ့သို့ ယဉ်ကျေးမှုကျောက်ခေတ် -VNS-1308HGCB
နောက်တစ်ခု: မြည်းကြိုးကိုဖြည် / ကျပန်းကျောက်ခေတ် -VNS-1120LS